“ သူ့ ခမျာ အားငယ်နေရှာတယ် ” | လောကမီးအိမ်
“ သူ့ ခမျာ အားငယ်နေရှာတယ် ”
Posted by ညီညီ on February 19, 2010
ကျွန်တော် ဒီနေ့ပရိုဂရမ်တစ်ခု သုံးနေရင်းနဲ့ကောင်လေးတစ်ကောင်နဲ့ တွေ့ ခဲ့ရတယ် …. ဒီကောင်လေးနဲ့ သေသေချာချာ စကားပြောဖြစ်တယ်ဗျာ …. ဒါကြောင့် ဒီကောင်လေးအကြာင်းကို ကိုယ့်အကို ညီလေးတွေကို ပြောပြချင်လို့ဒီပိုစ့်ကို ရေးလိုက်တာပါ … ကျွန်တော့်တို့ တွေ ကွန်ပြုတာကို သုံးတယ် … OS ပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ပရိုဂရမ်လေးတွေ သုံးတယ်ဗျာ …မသုံးတတ်ရင် စာအုပ်လိုက်ရှာဝယ်ကြတယ် … အင်တာနက်မှာ ရှာကြ စာအုပ်ဆိုင်မှာ လိုက်ရှာတာနဲ့ တင်အတော်မောရတယ်ဗျာ … ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ တွေ အနီးကပ်ဆုံးက ကောင်လေးတစ်ကောင်ကိုမေ့ထား
ကြတယ်ဗျာ … သူကတော့ ကျွန်တော်တို့ အခေါ်ကို စောင့်လို့ …ကောင်လေးက တခြားသူတော့မဟုတ်ဘူးဗျ ... Menu Bar ပေါ်က HELP !!!! လေးပါ ... ကဲ … Help အကြောင်းလေး နည်းနည်းပြောပြချင်တယ်ဗျာ …ဒီကောင်လေးဘာလဲ …???? ဒီကောင်လေးက ဘာလုပ်ပေးနိုင်လို့ လဲ ???…. ဟုတ်ကဲ့ … ကျွန်တော်ကတော့အကိုတို့ တွေသုံးနေတဲ့ဆော့ဝဲ ပရိုဂရမ်ကနေ အနီးကပ်ဆုံးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံးသော ရှင်းလင်းချက်တွေကို ပြောပြပေးရတဲ့ကောင်လေးပါ … ပြောပြချင်ပေမယ့် အကိုတို့ က ကျွန်တော့်ကို မခေါ်တာ … (ဝမ်းနည်းနေတာ) သေစမ်းဗျာ … စာအုပ်တွေ လိုက်ရှာနေတဲ့အချိန်တွေကို နှမြောလိုက်တာ …ဟုတ်ပါတယ် …ကျွန်တော်တို့ တွေ သူ့ ကိုမေ့ထားကြပါတယ် … တကယ်တမ်းတော့ပရိုဂရမ် ဆော့ဝဲတိုင်းမှာဒီကောင်လေး အမြဲပါ ပါတယ် …
ဥပမာ – ဝင်းဒိုးမှာ ဆိုရင် Hep and Support ပါတယ် … ဝင်းဒိုးအသုံးပြုပုံကို မေးမြန် ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် ..အကုန်လုံးကို စုံလင်စွာ ရေးထားပေးပါတယ် … ဝင်းဒိုးမှာပဲ ပါတာ မဟုတ်ပါဘူး … ပရိုဂရမ်တွေမှာကျတော့ Menu ဘားအပေါ်မှာ ဒီကောင်လေးရှိတယ် …ပရိုဂရမ်ရဲ့ ရှင်းလင်းချက် အသုံးပြုပုံ တွေကို ဆော့ဝဲ ရေးသားသူကပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ဒီကောင်လေးကို ပြောပြထားတယ် … ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ တွေ သုံးရမှန်းမသိကြဘူး …စာအုပ်တွေပဲ လိုက်ရှာဝယ်နေကြတယ် … ဒီကောင်လေးမှာ အသုံးပြုပုံ ရှင်းလင်းချက် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြည့်စုံစွာ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ် … စာအုပ်တွေကျတော့ သုံးစွဲနည်း အဆင့်ဆင့်တွေကို ဖွဖွရွရွလေးရေးထားတာကြောင့် ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်ဗျာ … ဒါပေမယ့်စာအုပ်တွေက ဈေးကြီးပေးဝယ်ရတယ် …ဒေါင်းလုပ်လုပ်တာကို မဆိုလိုဘူးနော် … ဒီကောင်လေးကျတော့ အမြဲတမ်း ဝန်ဆောင်မှုပေးတယ် … အလကားပဲဗျာ … ပရိုဂရမ်တစ်ခုတိုင်းမှာ ဒီကောင်လေးကို လက်ဆောင်ထည့်ထားပေးတယ်ဗျ ..အဲဒါကြောင့် ဒီကောင်လေးကို ခေါ်သုံးဖို့ မမေ့ကြပါနဲ့…ခေါ်ဖြစ်အောင် ခေါ်ဗျာ …“ သူ့ ခမျာ အားငယ်နေရှာတယ် …”
ကြိုးစားလျက် .. ညီညီ(လောကမီးအိမ်)
← Movavi VideoSuite 8	FSCapture Portable 6.5 →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...